Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo Kuwa Lacagta La Siiyo ee Jaamacadaha 11
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Bilaashka ah iyo Kuwa Lacagta La Siiyo ee Jaamacadaha 22
Waa kuwan dhowr koorso oo jaamacadeed oo Toronto ah oo ay ku jiraan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo. Jaamacadda Toronto waxay bixisaa dhowr koorso oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan barnaamijyada barashada ee kala duwan ee internetka waxayna soo saartaa shahaadooyin ka-qaybgalayaasha guuleysta ee koorsooyinkan.
Kanada waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu barto dhulka, waxay u muuqataa inaysan ku koobnayn halkaas mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya Kanada, Jaamacadda Toronto waxay siisaa koorsooyin khadka tooska ah qof kasta oo xiiseynaya midkood lacag ama gebi ahaanba bilaash.
1 Koorsooyinka Online-ka ee Jaamacadda Toronto
1.1 Xaqiiqda degdegga ah ee ku saabsan Jaamacadda Toronto
1.2 Koorsooyinka Onlineka ee Bilaashka ah ee Jaamacadda Toronto
1.2.1 BARO BARNAAMIJKA: AASAASIYAYAASHA
1.2.2 HORDHACA Cilmu-nafsiga
1.2.3 AASAASIGA IOS HORUMARINTA IOS
1.2.4 HORDHAC BARNAAMIJKA SWIFT
1.2.5 FANKA IYO SAYNISKA XIRIIRKA: FAHAMKA BAHADDA AADANAHA
1.2.6 HORDHAC GAADIIDKA IS-DARAWALKA
1.2.7 HORDHAC GOOBTA GUUD
1.2.8 DHAQAALAHA DHAQANKA
1.2.9 Tirakoobyada: Samaynta Dareenka Xogta
1.2.10 BARO BARNAAMIJKA: XEERKA TAYO U SAMEYNTA
1.2.11 Qorsheynta Mooshinka Baabuurta Is-wadista
1.3 Koorsooyinka Online-ka ee Lacagta Laga Bixiyo Jaamacadda Toronto
1.3.1 Cilmiga jirka AADAMAHA AASAASIGA AH
1.3.2 KU DHAQANKA IYO MAAMULKA MAARAYNTA MACLUUMAADKA
1.3.3 BARNAAMIJKA BARNAAMIJYADA WAXBARASHADA
1.3.4 HORDHAC SUUQA
1.3.5 Xisaabinta Dhaqaale ee Hordhac ah
1.3.6 SHARCIYADA SHAQADA
1.3.7 HADALKA DADWEYNAHA IYO SOO BANDHIGIDDA
1.3.8 QODOBADA MUUQAALKA MAAMULKA DADKA
1.3.9 Qorista Hal abuurka
1.3.10 HORDHAC LOOGU TALAGALAY SIXOOD SIGMA
1.3.11 AASAASIGA MAAMULKA MASHRUUCA AGILE
Koorsooyinka Online-ka ee Jaamacadda Toronto
Si kastaba ha noqotee Jaamacadda Toronto ma bixiso oo keliya koorsooyin bilaash ah oo online ah, waxaa jira koorsooyin onlayn ah oo lacag lagu bixiyo oo ay bixiso hay'addu sidoo kale maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa koorsooyinkan bilaashka ah iyo kuwa bilaashka ah ee internetka oo markaad aqriso waxaad noqon doontaa hal guji oo keliya si aad uga bilowdo fasalkaaga internetka ee Jaamacadda Toronto.
Xaqiiqda degdegga ah ee ku saabsan Jaamacadda Toronto
Waxaa la aasaasay 1827, Jaamacadda Toronto waa mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu caansan ee caan ku ah heer sare ee baridda, hal-abuurnimada, cilmi-baarista, hal-abuurnimada waxayna si weyn uga qayb qaadatay kobaca dhaqaalaha iyo wanaagga bulshada adduunka.
Kadib cilmi baaris balaaran oo had iyo jeer la sameeyo si loogu soo bandhigo sida ugu fiican akhristayaasheena, waxaan soo aruuriney 11 koorsooyin bilaash ah oo bilaash ah oo laga helo Jaamacadda Toronto.
Jaamacadda Toronto waxay ku taal Kanada sidii hore loo qoray Kanadana waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan adduunka ee wax lagu barto, waad tagi kartaa ku baro koorsooyin bilaash ah Kanada khadka tooska ah
Jaamacadda Toronto sii wadida barnaamijka waxbarashada sidoo kale waxaa lagu dhammaystiri karaa khadka tooska ah ama khadka tooska ah. Waad iska hubin kartaa jaamacadda celceliska heerka aqbalaadda halkan.
In kasta oo ay jiraan fursado waxbarasho oo badan oo khadka tooska ah ah oo Kanada ku yaal, haddana waxaa jira tiro wanaagsan oo fursadaha noocan oo kale ah oo ka baxsan Kanada. Waxaa jira tiro ka mid ah kulliyadaha internetka ee jaban oo aan khidmad dalab lahayn
Koorsooyinka Onlineka ee Bilaashka ah ee Jaamacadda Toronto
Aasaaska aasaasiga ah ee IOS App Development
Hordhaca Barnaamijka Swift
Farshaxanka iyo sayniska ee cilaaqaadka: Fahmida Baahiyaha Aadanaha
Hordhaca Baabuurta Is-wadista
Hordhaca Khariidaynta GIS
Tirakoobka: Samaynta Dareenka Xogta
Baro Barnaamijka: Farsamaynta Xeerarka Tayada
Qorsheynta Mooshinka Baabuurta Is-wadista
BARO BARNAAMIJKA: AASAASIYAYAASHA
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo dhiso bucshirooyinka barnaamijka oo aad awood ugu yeelatid inaad wax qorto iyo barnaamijyo waxtar leh adoo adeegsanaya luqadda Python. Kadib markaad ku guuleysato koorsadan, waxaad yeelan doontaa barnaamij aasaasi ah oo kumbuyuutar ah iyo xirfadaha barnaamijyada Python.
Muddada Koorsada: 29 saacadood
Cilmu-nafsiga waa barashada maskaxda iyo dabeecadda aadanaha. Koorsadan, waxaad ku baran doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan cilmu-nafsiga waxaadna awood u yeelan kartaa inaad aqoonsato noocyada kala duwan ee cudurrada dhimirka iyo sida loo caawiyo dadka ku dhaca.
Muddada Koorsada: 33 saacadood
AASAASIGA IOS HORUMARINTA IOS
Koorsadani waxay ku bari doontaa sida loo abuuro codsi macruufka ah (Apple) oo laga soo bilaabo xoqidda, waxay ballaarin doontaa xirfadahaaga barnaamijka oo aad markaa codsan karto si aad u horumariso mashaariic barnaamij oo dhab ah adoo adeegsanaya tilmaamo iyo xaddidaadyo cayiman.
Muddada Koorsada: 10 saacadood
HORDHAC BARNAAMIJKA SWIFT
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa xirfadaha iyo aaladaha looga baahan yahay sameynta barnaamijka iOS-ka ah dhulka oo aad awood u leedahay inaad ku qorto barnaamijyada macruufka adoo adeegsanaya barnaamij deg deg ah.
FANKA IYO SAYNISKA XIRIIRKA: FAHAMKA BAHADDA AADANAHA
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa fikradaha aasaasiga ah ee xeeladaha iyo xirfadaha barashada iyo nidaamka horumarinta iyo muhiimada ay u leedahay xiriir kasta maalin kasta isla markaana waxaad siisaa fikrado horumarsan shaqsiyaadka ka shaqeeya dhinacyada shaqada bulshada iyo daryeelka caafimaadka.
Muddada Koorsada: 28 saacadood
HORDHAC GAADIIDKA IS-DARAWALKA
Tani waa daraasad koorso bilow ah oo ku saabsan gawaarida is-wadista halkaana waxaad ku baran doontaa shuruudaha lagama maarmaanka ah, qiimeynta amniga iyo tixgelinta naqshadeynta gawaarida iswada. Ka dib markaad si guul leh ku dhammaysato koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee ay bixiso jaamacadda Toronto, waxaad awoodi doontaa inaad fahamto oo aad ogaato qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo ee baabuurta is-wadista ah oo aad tilmaamto qaybaha ugu waaweyn ee is-wadidda is-wadista software-ka.
Muddada Koorsada: 26 saacadood
HORDHAC GOOBTA GUUD
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa aasaaska Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS), Khariidaynta iyo Falanqaynta Meelaha, sida looga faa'iideysto softiweerka, loo akhriyo khariidadda si hufan loona diiwaan geliyo iskuduwaha. Markaad dhammaystirto koorsadan waxaad fahmi doontaa GIS iyo Mapping iyo sida loogu adeegsado xallinta dhibaatooyinka iyo soo saarista natiijooyin wanaagsan.
Muddada Koorsada: 18 saacadood
Tani waa koorso la xiriirta dhaqaalaha oo ku bari doonta sida loo barto xulashooyinka macaamiisha, dhacdooyinka suuqa iyo cilmu-nafsiga aadanaha si ay uga caawiso fahamka go'aannadooda ayna isugu dayaan inay sameeyaan qaabab dhaqaale oo sax ah.
Ka dib dhammaystirka koorsada, waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato mabaadi'da iyo hababka dhaqaalaha habdhaqanka si aad u beddesho dabeecadaha, u hagaajiso samafalka una sameyso wax soo saar wanaagsan iyo siyaasad.
Muddada Koorsada: 6 toddobaad, 4 saacadood usbuucii.
Tirakoobyada: Samaynta Dareenka Xogta
Kani waa koorso hordhac ah oo lagu dabakhayo sababaynta tirakoobka taas oo ardayda tusin doonta qaababka xog ururinta, sida loo horumariyo qaabab wax ku ool ah oo garaaf iyo tirsi leh si loo fahmo xogta, loo qalabeeyo xirfadaha tirakoobka aasaasiga ah iyo sida loo dalbado koorsadan baaritaanka guud baaxadda dhulka.
Muddada Koorsada: 22 saacadood
BARO BARNAAMIJKA: XEERKA TAYO U SAMEYNTA
Koorsadani waxay ku bari doontaa sida loo qoro koodh tayo leh oo si hufan ugu shaqeeya isla markaana soo saara natiijo wanaagsan sidoo kale waxaad baran doontaa sida loo qaabeeyo, loo qoro loona oggolaado barnaamijyada.
Muddada Koorsada: 20 saacadood
Koorsadani waxay ku bari doontaa sida loo qorsheeyo shaqooyinka darawalnimada otomaatiga ah oo ay ku jiraan degaanka, himilada iyo qorshaynta habdhaqanka. Koorsadan kadib, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho dariiqa ugu gaaban garaaf ama shabakad waddo adoo adeegsanaya algorithm gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira in ka badan 11 koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo ay bixiso Jaamacadda Toronto laakiin kuwani waa kuwa ugu sarreeya ee la soo ururiyey ka dib cilmi-baaristeyda maadaama ay ku siinayaan fursado sare oo ah inaad shaqo ku hesho dhaqso, inaad bilowdo waddo shaqo cusub ama aad ku dallacdo xafiiskaaga kadib markaad soo bandhigto xirfadahan.
Eeg jaamacadaha internetka ee ugu sareeya Australia
Hadda, mowduuca xiga oo aad si siman uga heli doonto xiiso.
Sidii aan horey u qoray, waxaa jira tiro jaamacado ah oo ku yaal koorasyo ​​khadka tooska ah ee Toronto ah halka qaarna ay bilaash yihiin, qaarna si isku mid ah loo bixiyo.
Hoos waxaa ku yaal liiska qaar ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee qiimaha badan ee internetka laga bixiyo oo ay bixiso jaamacadda Toronto iyadoo lagu qiyaasay muddadooda dhammaystirka.
Koorsooyinka Online-ka ee Lacagta Laga Bixiyo Jaamacadda Toronto
Physiology Aasaasiga ah
Diiwaanka Iyo Ku Dhaqanka Maareynta Macluumaadka
Horumarinta Iyo Gaarsiinta Barnaamijyada Barashada
Hordhac ku saabsan Suuqgeynta
Xisaabin Maaliyadeed Sare
Hadalka Dadweynaha iyo Soo Bandhigida
Waxyaabaha Muhiimka u ah Maareynta Dadka
Hordhac ku tiirsanaanta lixda qaab ee Sigma
Aasaaska Maamulka Mashruuca Agile
Cilmiga jirka AADAMAHA AASAASIGA AH
Koorsadan waxaa lagu baraa khadka tooska ah ee kulliyadda caafimaadka, Jaamacadda Toronto halkanna waxaad ku baran doontaa shaqooyinka jirka bini'aadamka, sida uu u shaqeeyo iyo sababta jirka bini'aadamku uga jawaabo xaaladaha sida uu u shaqeeyo. Waxaad sidoo kale baran doontaa jirka bini'aadamka sida ku xusan nidaamka jir ahaaneed, waa koorso daraasad aad ka heli doonto runtii xiiso leh.
Muddada Koorsada: 54 saacadood
KU DHAQANKA IYO MAAMULKA MAARAYNTA MACLUUMAADKA
Koorsadan daraasadda ah waxay kuu qoto dheer doontaa inaad keydiso macluumaadka, amniga, arrimaha maamulka iyo arrimaha gaarka ah. Waxaad baran doontaa hababka iyo farsamooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan sida loo xafido loona kala saaro macluumaadka, loo abuuro siyaasado iyo habraacyo qiimeyn halista wax ku ool ah. Kadib marka la dhammeeyo, waxaad awoodi kartaa inaad hirgeliso oo aad ku shaqeyso diiwaanno adag iyo barnaamijyada maaraynta macluumaadka ururada waaweyn.
Mudada Koorsada: 36 saacadood
BARNAAMIJKA BARNAAMIJYADA WAXBARASHADA
Koorsadan waxaad ku baran doontaa qalabka maareynta isbeddelka iyo sida loo adeegsado aagga lagama maarmaanka u ah, koorsadani waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto go'aanno istiraatiijiyadeed oo wanaagsan oo wax ku ool ah oo markii lagu dabaqo ganacsigaaga, ururkaaga, kooxdaada ama xirfaddaada ay soo saari doonto natiijo wanaagsan.
Muddada Koorsada: 24 saacadood
Tani waa fikradda aasaasiga ah ama bilowga ah ee suuqgeynta, waxaad baran doontaa xirfadda, hababka iyo farsamooyinka heerarka illaa fikradda suuq geynta dijitaalka ah ee lagu qiimeeyo inta lagu jiro urur guuleysta. Ka dib markaad dhammaystirto daraasaddan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku dabaqdo habka suuq-geynta dhibaatooyinka iyo xaaladaha la taaban karo.
Muddada Koorsada: 39 saacadood
Xisaabinta Dhaqaale ee Hordhac ah
Haddii aad aqoon durugsan u leedahay xisaabinta maaliyadeed ee aasaasiga ah markaa koorsadani waa adiga maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa xirfadle ka dib markaad dhex marto, waxay kugu qaadan doontaa qoto dheer xisaabinta maaliyadeed, waxay kuu soo bandhigi doontaa hababkii dhaqaale ee ugu dambeeyay ee ku habboon qaab ganacsi oo casri ah.
Muddada Koorsada: 48 saacadood
Koorsadani waxay ku bari doontaa sharciyada la xiriira ganacsiga iyo sida loo xalliyo arrimaha sharciga ee khuseeya ganacsiyada. Markaad dhamayso daraasaddan, waxaad awoodi doontaa inaad ka hadasho arrimaha sharciga iyo natiijada ka soo baxda, aqoonsato arrimaha sharciga ee maalin walba ka soo kordha ganacsiyada iyo inaad ogaato ereyada aasaasiga ah ee sharciga ah ee loo adeegsado meheradda maalinlaha ah.
HADALKA DADWEYNAHA IYO SOO BANDHIGIDDA
Sida aad ula hadasho dadka kale wax badan ayey iska leedahay, koorsadan waxaad ku baran doontaa xeeladaha muhiimka u ah isgaarsiinta wax ku oolka ah. Waxaa lagugu qurxin doonaa kalsooni iyo waxa ku habboon oo aad ugu adeegsan karto dhagaystayaashaada ha noqoto macmiil ama macmiil.
Muddada Koorsada: 36 saacadood
QODOBADA MUUQAALKA MAAMULKA DADKA
Ma waxaad ku hamiyaysaa inaad noqoto hoggaamiye ama maamule? Kadib koorsadani waa adiga, waxaad baran doontaa xirfadaha, qaababka iyo farsamooyinka ku saabsan sida loo maareeyo dadka loona maareeyo iyaga si sax ah si ay u soo saaraan natiijo wax ku ool ah oo ku saabsan sababta maamulkaas.
Muddada Koorsada: 15 saacadood
Qorista Hal abuurka
Hal mar nolosheena waxaan aqrinay ama la kulanay qoraallo qoraal ah oo naga caawiyay, koorsadan waxbarasho waxay gacan ka geysan doontaa kobcinta xirfaddaada qorista. Waxaad baran doontaa sida loo qoro waxyaalo wax ku ool ah oo u eegi doona raali ahaanshaha macaamiishaada, ganacsiyadaada iyo macaamiishaadu.
HORDHAC LOOGU TALAGALAY SIXOOD SIGMA
Ururradu waxay caan ku ahaayeen inay u jeestaan ​​habka Lean Six Sigma (LSS) markay rabto inay dhab ka noqoto hagaajinta howlaha iyo tayaynta tayada.
Koorsadan khadka tooska ah ee jaamacadda Toronto, waxaad ku baran doontaa xirfadaha aasaasiga ah ee looga baahan yahay fulinta mashaariicda LSS, faham dheeri ah oo ku saabsan sababta ay wax u khaldamaan iyo sida loo qorsheeyo horumarinnada la qiyaasi karo markay dhacaan.
AASAASIGA MAAMULKA MASHRUUCA AGILE
Koorsadani waxay kaa caawin doontaa inaad ku dhisto aqoontaada aasaasiga ah Maareynta Mashruuca Agile. Waxaad baran doontaa habka agile ee wax soo saarka iyo maareynta mashruuca, sida loo mideeyo kooxaha mashruuca ee abuuraya xalal cusub iyo aqoonta sida loo qorsheeyo loona bixiyo mashaariicda si guul leh.
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya 11 koorsooyin lacag lagu bixiyo oo ay bixiso Jaamacadda Toronto si kor loogu qaado aqoonta aad horey u laheyd adiga oo kaa dhigaya xirfadle ama baranaya wax gebi ahaanba cusub oo lagu daro xirfadahaaga kale.
Haddii aad tahay arday khadka tooska ah ku dhinta, waxaad heli kartaa a shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee internetka in ka yar kala bar muddada caadiga ah ee sannadaha waxay qaadan doontaa khadka tooska ah.
Jaamacaddan ku taal magaalada Toronto koorsooyin bilaash ah oo lacag la’aan ah ma ahan dhammaan koorsooyinka ay jaamacaddu bixiso laakiin waa kuwa heerka sare ah ee shaqo ku heli kara si dhakhso leh ama kugu hormariya goobtaada shaqada. In kasta oo tani ay tahay uun fekerkeyga shaqsiyadeed, haddii goobta aad rabto inaad qaadatid aan halkaan lagu qorin oo aadan u muuqan inaad jeceshahay mid ka mid ah kuwa ku taxan, waxaad xor u tahay inaad raacdo qalbigaaga.
Dhammaan koorsooyinka internetka ee liistada ku qoran waxay asal ahaan ka mid yihiin koorsooyinka xirfadeed ee isbeddelka qarniga 21-aad ee looga baahan yahay xoogsatada maanta, sidaa darteed barashadooda waxay kaa dhigeysaa inaad ka horreyso tartanka sidoo kale daraasaddaada si dhab ah ha ugu qaadatid maadaama natiijada waxa aad soo baratay ay go'aamin doonto sida fog waad tagi doontaa.
Koorsooyinka Online-ka ee Bilaashka ah iyo Kuwa Lacagta Badan ee Jaamacadda TorontoKoorsooyinka tooska ah ee Jaamacadda Toronto ee bilaashka ahKoorsooyinka Online-ka ee Jaamacadda TorontoJaamacadda Toronto waxay bixisay Koorsooyin Online ah
Previous Post:Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado Marka la dooranayo Goobaha Qolka Ardayda Kulliyadda
Post Next:Sidee looga Badbaadaa Sannadkaaga Koowaad ee Ku Nool Dibadda | Expat Fahanka CPA
Pingback: 27 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada oo leh deeqo waxbarasho
Violet NAKYEVUGA wuxuu leeyahay,
June 26, 2021 at 9: am 25
Goorma ayaan codsadaa anigoo ah arday caalami ah koorsada Dhaqanka Dabeecadda